(Dhagayso) Maxkamada gobolka Nugaal oo shaacisay in Radio Sahal lagu waayay wax dambi ah oo ay galeen. – Radio Daljir
(Dhagayso) Maxkamada gobolka Nugaal oo shaacisay in Radio Sahal lagu waayay wax dambi ah oo ay galeen.
Agoosto 17, 2015 6:50 b 0
Garowe, August, 17 – Maxkamada Darajada Koowaad ee gobolka Nugaal ayaa maanta soo gaba gabaysay dacwadii u dhaxaysay Idaacada sahan iyo Wasaarada warfaafinta Puntland, Dacwada Idaacada waxaa ku soo oogay ku xigeenka Xeer ilaaliyaha Puntland Maxamed Xareed Waxaa idaacada lagu haystay in ay daabacday war ku saabsan qabashada xafladii Kowda Agoosto.
Dooda dacwada oo socotay ilaa labo todobaad ayaa maxkamadu sheegtay in wax dambi ah gelin Idaacada Sahan oo ay soo bandhigeen fikirkooda oo u ogolaanayo dastuurka Puntland, Garsooraha maxkamada Darajada Kowaad Cabdiqani Mire oo xukunka ka hor akhriyey maxkamada ayaa ka hadlay sida ay dacwada ku soo bilaabatay isagoo sheegay in Dacwada ay soo gudbisay wasaarada warfaafinta oo uu wakiil u ahaa ku xigeenka xeer ilaaliyaha Puntland.
Garsooraha wuxuu sheegay in maxkamadu ay xukuntay Qareenka u doodayey idaacada Sahan oo uu ku eedeeyey in uu maxkamada dhexdeeda ku adeegsaday hadalo meel ku dhac ku ah xafiiska xeer ilaaliyaha isagoo ku xukumay ganaax lacageed oo dhan $100.
Intaas ka dib waxaa banaanka hore ee maxkamada shir jaraa’id ku qabtay Ururka Saxaafa Puntland MAP, Milkiilaha Idaacada Sahan iyo Gudoomiyaha Xafiiska Xuquuqul Insaanka Puntland ee madaxa Banaan.
Gudoomiyaha MAP Faysal Khaliif wuxuu sheegay in uu soo dhaweynayo go’aanka Garsooraha maxkamada oo uu sheegay in uu abaaray sida saxda ee xukunkan, wuxuu sheegay inhabkan la maray ay tahay sida ugu haboon ee warbaahin loola xisaabtamo, Dowladda Puntland u sheegay in la ilaaliyo xaqa Saxaafadu leedahay.
Gudoomiyaha Xafiiska Xuquuqul Insaanka Puntland ee madaxa banaan Maxamed Yuusuf ayaa fariin u diray dhamaan hay’adaha dowladda oo uu sheegay in ay ilaaliyaan sharciga iyo dastuurka Puntland oo dhigaya in qofku soo bandhigi karo fikirkiisa, Wuxuu sheegay in saxaafadu madax banaan tahay oo ay leeyihiin xuquuq buuxa oo dastuurka ku cad.
Ku xigeenka xeer ilaaliyaha Puntland Maxamed xareed ayaa rafcaan ka qaatay xukunka Maxkamada darajada koowaad, Dacwadan oo soo socotay labadii todobaad ee u dambeeyey ilaa laba jeerna dib u dhacay ayaa noqonaysa midii ugu horaysay oo warbaahin iyo dowladda isla aadaan Garsoorka dalka.
(Dhagayso) Afhayeenka issimada Puntland Garaad Cali Ciid oo soo dhaweeyay doorashada Jubbaland, hambalyana u diray MD Axmed Madoobe.
DHAGAYSO:Ammbasador AFey oo u Hambalyeey Axmed Madoobe lana dar-daarmay